Marko 5 | Intanɛt So Bible| Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
5 Afei, wokoduu po no agya wɔ Gerasafo+ asase so. 2 Na osi fii ɔkorow no mu ara na ɔbarima bi a honhom fĩ akɛntɛn no so fi asiei+ behyiaa no. 3 Na asiei hɔ abɛyɛ ne tenabea; na besi saa bere no na obiara ntumi mfaa nkɔnsɔnkɔnsɔn mpo nkyekyeree no ntenaa faako, 4 efisɛ na wɔde mpokyerɛ ne nkɔnsɔnkɔnsɔn akyekyere no mpɛn pii ma watetew nkɔnsɔnkɔnsɔn no mu abubu mpokyerɛ no; na obiara nni ahoɔden a ɔde bedi no so. 5 Na daa adesae ne adekyee, ɔteɛteɛm wɔ ada ne mmepɔw no mu de abo twitwa ne ho. 6 Na n’ani bɔɔ Yesu so wɔ akyirikyiri no otuu mmirika kɔkotow n’anim, 7 na ɔde nne kɛse teɛɛm+ sɛ: “Dɛn na me ne wo wɔ yɛ, Yesu, Ɔsorosoroni Nyankopɔn+ no Ba? Ka Onyankopɔn ntam+ sɛ worenhaw me.”+ 8 Efisɛ na waka akyerɛ no sɛ: “Honhom fĩ, fi onipa no mu.”+ 9 Na ofii ase bisaa no sɛ: “Wo din de dɛn?” Na ɔka kyerɛɛ no sɛ: “Me din de Asafotow,+ efisɛ yɛyɛ bebree.”+ 10 Na ɔkɔɔ so ara srɛɛ no sɛ ɔmmpam ahonhom no mmfi asase no so.+ 11 Na ɛbae sɛ na mprakokuw+ kɛse bi wɔ bepɔw no so redidi.+ 12 Enti wɔsrɛɛ no sɛ: “Ma yɛnkɔ mprako no mu, ma yɛnkɔhyɛn wɔn mu.” 13 Na ɔmaa wɔn kwan. Ɛnna ahonhom fĩ no fii adi kɔhyɛn mprako no mu; na mprako bɛyɛ mpem abien no bɔɔ kirididi fii bepɔw no so koguu po mu, na wowuwui wɔ po no mu mmiako mmiako.+ 14 Na wɔn a wɔrehwɛ wɔn so no guan kɔbɔɔ amanneɛ wɔ kurow no mu ne ne nkuraase; na nkurɔfo ba bɛhwɛɛ nea asi.+ 15 Enti wɔbaa Yesu nkyɛn, na wohuu ɔbarima a na ɔwɔ adaemone no, nea na ɔwɔ asafotow no, sɛ ɔhyɛ atade te hɔ a n’adwenem atew; na ehu kaa wɔn. 16 Afei wɔn a wohui no kaa nea ɛtoo ɔbarima a na ɔwɔ adaemone no ne mprako no ho asɛm kyerɛɛ wɔn. 17 Enti wofii ase paa no kyɛw sɛ omfi wɔn mpɔtam hɔ nkɔ.+ 18 Na bere a ɔreforo ɔkorow no, ɔbarima a na ɔwɔ adaemone no fii ase paa no kyɛw sɛ ɔne no bɛkɔ.+ 19 Nanso wamma no kwan, mmom ɔka kyerɛɛ no sɛ: “Kɔ wo fie, w’abusuafo nkyɛn,+ na kɔka nea Yehowa+ ayɛ ama wo nyinaa ne mmɔborɔhunu+ a wayi adi akyerɛ wo no kyerɛ wɔn.” 20 Na ofii hɔ kɔe na ofii ase kaa nea Yesu yɛ maa no nyinaa ho asɛm wɔ Dekapoli,+ na ɛyɛɛ nkurɔfo no nyinaa nwonwa.+ 21 Bere a Yesu san de ɔkorow no twa baa asuogya no, nnipakuw kɛse bi twaa ne ho hyiae; na ɔwɔ po no ano.+ 22 Ɛnna hyiadan mu mpanyimfo no mu biako a ne din de Yairo bae, na n’ani bɔɔ no so no ɔhwee ne nan ase+ 23 na ɔsrɛɛ no mpɛn pii sɛ: “Me babea ketewa reyɛ awu. Mesrɛ wo bra na fa wo nsa+ begu no so ma ne ho nyɛ no den na onnya nkwa.”+ 24 Ɛnna ɔne no kɔe. Na nnipadɔm pii tu dii n’akyi na wɔkyeree no so.+ 25 Afei na ɔbea bi wɔ hɔ a mogya atu no+ mfe dumien,+ 26 na wahu amane pii wɔ nnuruyɛfo+ bebree nsam na wahwere n’ahode nyinaa nanso hwee amfi mu amma, na mmom ɛyɛɛ kɛse. 27 Bere a ɔtee Yesu ho asɛm no, ofi dɔm no mu faa akyi de ne nsa bɛkaa+ n’atade nguguso; 28 na asɛm a na ɔreka ara ne sɛ: “Sɛ mede me nsa ka n’atade nguguso kɛkɛ mpo a, me ho bɛtɔ me.”+ 29 Na amonom hɔ ara mogya a ɛretu no no twae, na ɔtee nka ne nipadua mu sɛ wanya ɔyare a emu yɛ den no ho ayaresa.+ 30 Ɛhɔ ara na Yesu nso hui sɛ tumi+ afi ne mu, na ɔdan ne ho nnipakuw no mu bisae sɛ: “Hena na ɔde ne nsa kaa m’atade nguguso no?”+ 31 Na n’asuafo no ka kyerɛɛ no sɛ: “Woahu sɛ nnipa akyere wo so,+ na wuse, ‘Hena na ɔde ne nsa kaa me?’” 32 Nanso ɔtotoo n’ani hwɛe sɛ obehu nea ɔyɛɛ saa no anaa. 33 Na esiane sɛ ɔbea no nim nea ato no nti, ɔde ehu ne ahopopo bɛhwee n’anim kaa mu nokware nyinaa kyerɛɛ no.+ 34 Ɔka kyerɛɛ no sɛ: “Ɔbabea, wo gyidi ama wo ho atɔ wo. Fa asomdwoe kɔ,+ wo ho ntɔ wo na wo yare a emu yɛ den no nkɔ.”+ 35 Na ogu so rekasa no, mmarima bi fi hyiadan mu panyin no fie bɛkae sɛ: “Wo babea no awu! Dɛn nti na woda so rehaw ɔkyerɛkyerɛfo no?”+ 36 Nanso bere a asɛm a wɔreka no twaa Yesu asom no, ɔka kyerɛɛ hyiadan mu panyin no sɛ: “Nsuro, wo de, nya gyidi.”+ 37 Afei wamma obiara anni n’akyi, gye Petro ne Yakobo ne Yakobo nua Yohane nkutoo.+ 38 Enti wɔbaa hyiadan mu panyin no fie, na ohui sɛ ɛhɔ ayɛ gyegyeegye na nnipa resu bɔ bena, 39 na ɔhyɛn mu no, ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Dɛn nti na moreyɛ gyegyeegye na moresu? Abofra ketewa no nwui, na mmom wada.”+ 40 Eyi nti wofii ase serew no. Ɛnna ɔpam wɔn nyinaa fii hɔ faa abofra no papa ne ne maame ne wɔn a wɔka ne ho no, na ɔkɔɔ nea abofra no wɔ no.+ 41 Na osoo abofra ketewa no nsa ka kyerɛɛ no sɛ: “Talita kuum,” a ɛkyerɛ sɛ: “Abeawa, mise wo sɛ, sɔre!”+ 42 Na ɛhɔ ara abeawa no sɔree na ofii ase nantewee, na na wadi mfe dumien. Na wɔn ho dwiriw wɔn.+ 43 Na ɔbaraa wɔn tĩĩ mu kae sɛ wɔmmma obiara nnte+ ho asɛm, na ɔkae sɛ wɔmma abeawa no biribi nni.